Press release on Somalia Measles vaccination campaign | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Press release on Somalia Measles vaccination campaign
written by warsan radio 13/03/2018
“Ololaha ayaa sii xoojin doona dadaallada si loo dardargeliyo tallaalka joogtada ah iyo si loo gaaro carruurta aan la tallaalin si loo xoojiyo difaaca jirkooda. Sidii aan aragney sanadkii hore markii ay wada-hawlgalayaashu wax ka qabanayeen daacuun ba’an oo dillaacay, marka tallaabooyin sax ah
laga qaado, WHO iyo maamullada caafimaadka waxaa ay ku kalsoon yihiin in
guul taas la mid ah laga gaari karo xakameynta jadeecadan dillaacdey,” ayaa
uu yiri Dr Ghulam Popal, oo ah Wakiilka WHO ee Soomaaliya.
Abaar ba’an oo jirtey wax ka badan laba sano ayaa sababtey nafaqo-xumo
ba’an, barokac badan, iyo in aan la helin biyo nadiif ah iyo fayadhowr taas oo
abuurtey xaaladihii ugu habboonaa ee ay ku dillaaci kareen cudurrada faafa.
“Xaaladda ayaa gaar ahaan ku culus malaayiin carruur ah oo aan qabin
tallaal ku filan, kuwo jilicsan iyo kuwo nugul oo u baylahsan qaadista
cudurrada faafa. In ka badan 1.2 milyan oo carruur ah ayaa la qiyaasayaa in
ay halis ugu jiraan nafaqo-xumo ba’an 12da bilood ee soo socda. Carruurtan
ayaa sagaal jeer ay uga dhowdahay in ay dilaan cudurrada loo dhinto sida
jadeeco ama shuban-biyood ba’an/daacuun marka loo eego carruurta
caafimaadka qaba,” ayaa uu yiri Steven Lauwerier, oo ah Wakiilka UNICEF
Ololahan u dambeeyey ka hor, dhammaadkii 2017dii, WHO waxaa ay
shaqaalaha caafimaadka ee Soomaalida ah u qabatey tababarro xiriir ah oo
ku saabsan in goor hore la ogaado waxna laga qabto jadeecada dillaacda.
Tababarrada ayaa lagu higsanayey in lagu sii wanaajiyo ilaalo gaar ah oo
laga hayo kiisaska iyo in sheybaar lagu xaqiijiyo, sii wanaajinta maareynta
kiisaska jadeecada ee xilliyada uu cudurku dillaaco, iyo in la gaaro tallaalka
joogtada ah ee jadeecada ee ugu hooseeya oo ah 95 boqolkiiba.
UNICEF ayaa soo iibisey oo qaybiseyna in ka badan 4.7 milyan oo qiyaasta
mar la qaato ee tallaalka Jadeecada ah waxaana ay qabanqaabisey 1700
abaabulayaal bulsho ah oo qoysaska ku dhiirrigeliya in ay tallaalaan carruurta
iyo dadka waaweyn ee aan qaadan ama ay u maleynayaan in aaney si
buuxda u qaadan tallaalka. Kan waxaa la socon doona Fitamin A dheeri ah oo
gacan ka geysanaya xoojinta difaaca jirka.
Waxqabadka waxaa taageerey maaliyad laga heley Alwaleed Philanthropies
(Saudi Arabia), maaliyad-siinta WHO, iyo Sanduuqa Bani’aadamnimada ee
Macluumaad dheeri ah, fadlan kala soo xirii:
RIIX HALKAAN SI AAD U AKHRISATO
Press release on Somalia Measles vaccination campaign was last modified: March 13th, 2018 by warsan radio